Madaxweynaha Somalia oo War-saxaafadeed ka soo saaray caawa weerarkii maanta ka dhacay Muqdisho | Salaan Media
Madaxweynaha Somalia oo War-saxaafadeed ka soo saaray caawa weerarkii maanta ka dhacay Muqdisho
Muqdisho, 19 June 2013 – Madaxweynaha Jahmuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamud oo ka hadlayey qaraxii iyo weerarkii kooxaha argagaxisada ku sameeyeen xarunta Qaramada Midoobey ee Muqdisho ayaa yir
“Al-Shabaab waxey dhib ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. Is qarxintii ay maanta u geysteen dadkii u soo gurmaday shacabka ee arrimaha gargaarka iyo dib u dhiska oo aan hubeysneyn waxey na tuseysaa inaysan wax muraad ah ka laheyn shacabka iyo dalka Soomaaliya.
“Waxaa la caddeeyey inay qaraxan ku dhinteen 8 qofood oo afar ay ahaayeen Soomaali. Anigoo ku hadlaya magaca shacabka iyo kan dowladda Soomaaliyeed waxey tacsi u dirayaa eheladdii iyo saaxiibadii ay ka geeriyoodeen, isla markaana EEBBE uga baryey in inta dhaawaca ah uu EEBBE u fududeeyo dhaawacooda.
“Waxaan la hadlay Ban Ki Moon, Xoghayaha Guud ee QM iyo Nick Kay, Ergeyga Gaarka ah ee XG ee QM, oo aan u sheegey sida aan uga xumahay falkan arxan la’aanta ah, igana gaarsiiyaan farriinteyda dhammaan shaqaalaha Qaramada Midoobey. Xeradan QM waxaa joogey shaqaale u soo gurmaday shacabka Soomaaliyeed, mana aheyn inay falal noocan oo kale ah ay ka dhacaan.
“Waxaan u mahadcelinayaa ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo si dhaqsi leh u gurmaday isla markaana badbaadiyey qaar ka mid ah shaqaalaha. Shaqaalaha QM ee xarunta joogey waxey si geesinimo leh u dhaqmaan xilli ay falalka argagaxa ay socdeen. Waxaa mahad Alle ah in a in badan bad-baadeen.
“Sanadkii la soo dhaafay Soomaaliya waxey ku tallaabsatay horumar. Waxaan ku jirnaa waqtigii dib u soo kabashada, nabadeynta iyo dib u heshiisiinta. Argagaxnimo iyo dagaal noocan oo kale ah ma naga leexinayaan waddada horumarka ee aan ku socono.
“Al Shabaab waxey ka soo horjeedaan nabadda shacabka. QM iyo dhammaan hay’adaha saacida Soomaaliya way ogyihiin in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumar oo aan wadajirkeena si xoog leh u wada taagnaan karno oo aan ka wada shaqeyn karno sidii dalka amni iyo kala danbeyn loogu soo celin lahaa.”